Excel mankany amin'ny Google Earth, manomboka amin'ny fandrindrana UTM - Geofumadas
Hanan-tombo ny Google Earth, avy UTM Flag
Febroary, 2012 Downloads, Featured, Google Earth / Maps
Andeha hojerentsika ny raharaha:
Nankany an-kianja aho hanamboatra trano iray, araka ny aseho eto amin'ity latabatra manaraka ity ary te-hijery izany ao amin'ny Google Earth, anisan'izany ireo sary roa azoko
Ny tena endriky ny môdely dia iray monja:
niova fo UTM dia mandrindraHoronantsary amin'ny endri-tsoratra, satria io no takin'i Google
Azonao atao ny mametraka ny anaran'ny dossier de destination
Alefaso ny marika kml
Soraty ny rakitra efa misy, na dia efa misy aza izany
Mamela ny fampiasana tags HTML amin'ny famaritana, toy ny sary, ny rohy hyperlinks, sns.
Vonona ny sasin-tsarimihetsika mba ho voafaritra ny spheroid, fantatray fa ny Google Earth dia tsy maintsy misafidy WGS84.
Ao amin'ny tsanganana voalohany dia miditra ireo angona izay haseho an'i Google Label.
Ao amin'ny roa manaraka dia mandrindra ny UTM, mitandrina fa ny rafitray dia voalamina hampiasa ny koma sy ny teboka ho toy ny mpampisaraka decimal toy ny mpanasaraka an'arivony. Ka tsy azo atao ny mandrindra toa ny 599.157,90 fa tokony hosoratana ho 599157.90
Ao amin'ny tsanganana manaraka dia miditra amin'ny faritra isika. Amin'ny fametrahana azy amin'ny andalana voalohany fotsiny dia hovaina ny hafa. Na dia azo ovaina tanana aza izy ireo raha toa ka mihoatra ny fetran'ny faritra roa ny data. Toy izany koa ny hemisphere; amin'ity tranga ity dia mampiasa angona avy any Bogotá aho, noho izany dia mampiasa ny Zone 18 sy ny Hemisphere Avaratra aho.
Ary farany, ny famaritana, izay no ho hitantsika rehefa manindry ny teboka ao amin'ny Google Earth.
Ahoana ny fandefasana ireo fandrindrana ireo any amin'ny Google Maps ary atoroy azy ireo any amin'ny Google Earth
Dingana 1. Ampidino ny môdely famahanana data. Ampiasao ny ohatra nasehonareo tamin'ny sary azonao Afaho ity môdelina ity.
Dingana 2. Ampidiro ny modely. Amin'ny fisafidianana ny môdelina amin'ny angon-drakitra, ny rafitra dia hampahafantatra raha misy ny data izay tsy azo valiana; Anisan'ireo valim-panontaniana ireo ny:
Raha tsy misy ny tsanganana voatokana dia tsy misy
Raha manana faritany tsy misy tarehimarika ireo kôperativa
Raha tsy eo anelanelan'ny 1 sy ny 60 ny faritra
Raha toa ny saha iraisam-pirenena dia misy zavatra hafa noho ny Avaratra na Atsimo.
Ny angona famaritana dia manohana atiny html, toy ilay aseho amin'ny ohatra izay misy ny fampisehoana sary. Mbola hanohana ireo zavatra toy ny rohy mankamin'ny làlana amin'ny Internet na ny kapila an-toerana an'ny solosaina, horonan-tsary, na atiny manankarena rehetra.
Dingana 3. Alao sary an-tsaina ny angona ao anaty latabatra sy amin'ny sarintany.
Avy hatrany dia nakarina ny angon-drakitra, ny latabatra dia hampiseho ny tahirin-tsoratra alphanumerika sy ny sarintany ny toerana misy azy; Araka ny hitanao, ny dingam-pamokarana dia ahitana ny fanovàna ireo koorda ireo amin'ny endrika geografika araka izay takian'ny Google Maps.
Vantany vao mivoaka ny kisary, ireo teboka napetraka eo amin'ny Google Street View dia azo zahana sy hitety azy io. Amin'ny fipihana eo amin'ny kisary dia afaka mahita ny antsipiriany ianao.
Dingana 4. Atsipazo ny angona. Amin'ny alàlan'ny default, ny enta-mavesatra dia ao amin'ny WGS84, ampiasain'ny Google. Saingy io fampiasa io dia mamela anao hiova amin'ny rafitra fandrindrana vinavina hafa ary hamelombelona ny sari-tany. Ohatra, mivadika any amin'ny Clarke 1866 aho ary mahita fa ny voro-tampony dia vinavinaina indray amin'ny sarintany.
Eto dia ahitanao ny modely miasa ao anaty horonantsary.
Dingana 5. Ampidino ny sarintany Kml amin'ny alàlan'ny serivisy gTools.
Mampiditra kaody fampidinana ianao ary avy eo manana ilay rakitra azonao jerena ao amin'ny Google Earth; Mampiseho ny toerana ahazoana kaody fisintomana izay ahafahanao misintona hatramin'ny 400 ny rindranasa, tsy misy fetra ny isan'ny kofehy isaky ny misintona mampiasa ny gTools API. Mampiseho ny fandrindrana avy amin'ny Gooogle Earth fotsiny ny sari-tany, miaraka amina fomba fijery maodely telo habe.
Safidy iray hafa: avadiho ireo rakitra ho kml mampiasa makro Excel
Vantany vao fenoina ny angona tabular dia miseho eo ankavanana ny anaran'ny fisie kml sy ny adiresy izay hitahiry azy. amin'ity tranga ity dia miseho toy ny C: \_ Career 25 X.kml
Ao amin'ny laharàny ambany dia manoratra ny anarana hoe manana ny sarintany ao amin'ny tahiry KML, amin'ity tranga ity: Asa Fanampiana 25 X
Ny valiny dia izao: amin'ny fikasihana teboka iray dia azonao atao ny mampiseho ny famaritana ny tsanganana Excel farany.
Farany, raha vantany vao vonona isika dia manindry ny bokotra maitso, ary tokony naterina ny rakitra.
Ny valiny, rehefa manokatra azy ao amin'ny Google Earth dia ity manaraka ity. Jereo ny anaran'ilay sosona, araka ny iantsoantsika azy, ary avy eo dia misy ireo teboka miaraka amin'ny famaritana azy; Mampiakatra azy ireo ny fampisehoana antsipiriany. Raha ireo zavatra na etikety Tena lehibe izy ireo, afaka manova azy ireo ao amin'ny Google Earth amin'ny alàlan'ny tsindrio havanana amin'ny sehatra sy fisafidianana ny toetra.
Ahoana ny manampy ny sary mankany kml
Tsotra izany, mihevitra aho fa amin'ny antsipirihan'ny banky dia te hametraka ny sarin'ny takelaka cadastre aho, avy eo ao amin'ny efi-trano mifanaraka amin'ny filazalazana soratako:
Ferana fetra, banky avo lenta Cadastre
Toy izany ihany koa, raha toa ka niantso an-tsary aho, te-hametraka sary ny fasan'ny trano aho, dia mitovy ny fomba fiasa.
Raha mila ampidirina andalana maromaro ianao, dia manaova dika mitovy amin'ireo efa misy, mba handehanany miaraka amin'ny formula.
Tsy ilaina ny manampy tsanganana, raha manao izany ianao dia mety tsy mihetsika intsony izy.
Ilaina ny hanaiky ny famonoana macros rehefa manokatra ny rakitra Excel
Raha mandefa hafatra diso ianao dia mety tsy manana alalana hanoratra ny lahatahiry C: dia azonao atao ny manandrana fampirimana hafa toa an'i C: \_ mpampiasa \_ misintona \_ raha mbola misy ilay fampirimana.
Afaka eto ianao avy eto ny rakitra kml araka izay tokony ho izy.
Ny fampidinana ny maodely ao amin'ny Excel dia mila fandraisana anjara ara-panoharana, azonao atao izany Paypal na carte de crédit.
Raha ny momba anao dia ny kôdôgrafika Geographic amin'ny karazana Latitude, Longitude, ary tianao halefa any amin'ny Google Earth, ny template dia ity.
Mety hitranga izany, raha toa ka miseho ny iray amin'ireto toe-javatra manaraka ireto rehefa mampiasa ny fangatahana:
Hadisoana 75 - Fandefasana rakitra.
Izany dia mitranga satria ny lalana izay voafaritra hoe aiza ny tahiry KML dia tokony ho voavonjy na tsy mahazo alalana ho an'ity asa ity.
Ny tsara indrindra dia tokony asio làlana amin'ny kapila D, izay misy fetra vitsy noho ny kapila C. Ohatra:
Ireo teboka ireo dia mivoaka eo amin'ny Tendrontany Avaratra.
Izany dia mitranga matetika, satria ao amin'ny varavarankelintsika, araka ny voalaza ao amin'ny torolàlana momba ny modely ho an'ny asa, ny rafitra isam-paritra dia tokony hiorina amin'ny sehatra isam-paritra:
-Point, ho an'ny mpisavalalana isam-bolana
-Coma, ho an'ny mpizara an'arivony
-Coma, ho an'ny mpizara lisitra
Noho izany, ny angon-drakitra toy ny: Metatra valo amby fitonjato sy iray metatra sy iray santimetatra dia tokony ho hita ho 1,780.12
Ny sary dia mampiseho ny fomba fanatanterahana azy io.
Ity dia sary iray mampiseho ny fanoratana ao amin'ny tontonana.
Raha vantany vao vita ny fanovana, dia averina indray ilay rakitra ary avy eo, hiseho ireo hevi-dehibe izay mifanaraka amin'ny Google Earth.
Raha manana fanontaniana ianao dia manorata amin'ny mailaka fanohanana editor@geofumadas.com. Izy io dia manondro foana ny kinova amin'ny windows ampiasainao.
tapakila Google Earth KML
Previous Post«Previous Mianara AutoCAD mijery
Next Post AutoCAD 3D Mazava ho azy fa any am-baravarana, fa $ 34.99manaraka »
114 Mamaly ny "Excel mankany amin'ny Google Earth, avy amin'ny fandrindrana UTM"
Raha nividy ny maodely ianao dia manorata amin'ny mailaka fanampiana mifandraika amin'ny mailanao.
Matetika ity no mailaka: tonian-dahatsoratra @ geofumadas. fr
Steinar hoy izy:
Makà token ETO virker ikke. Hvor kan jeg får tak i den?
Mahazo famantarana ETO tsy mandeha. Aiza no ahazoako azy?
Salama, azonao atao ny mizara demo na fampiharana fanadinana vonjimaika "Excel mankany amin'ny Google Earth, avy amin'ny mpandrindra UTM", ho an'ny tanjona fanabeazana ary amin'ny fomba fampiroboroboana ny fampiharana ataonao ihany. Misaotra anao
Mandehana any amin'ny sehatra ofisialy ao amin'ny Windows anao ary apetraho ny teboka ho toy ny sasan-tsipika sasantsasany ary ny takelaka ho toy ny fisintonana an'arivony.
Raha mbola misalasala ihany ianao manoratra amin'ny mailaka fanohanana izay tonga amin'ny fividianana ny môdely.
Wueber Bogado hoy izy:
Izy io koa dia mitondra ahy any amin'ny faritra avaratra ary ny rahona dia ao Asunción del Paraguay
Ny olana dia voavaha tamin'ny fanohanana.
Olana amin'ny fifanarahana amin'ny birao vaovao amin'ny birao 365 sy 64.
Na ny olana dia rafitra eo amin'ny faritra misy anao eo amin'ny rafitra misy anao.
Tsy maintsy miantoka fa ny banga iray dia napetraka, toy ny separator milhar, tsy misy toy ny lisitry ny fisarahana na toy ny sasan-tsipika.
Raha te hahazo fanohanana amin'ny fividianana modely, mandefa e-mail ny fanohanana miaraka amin'ny fividianana.
Ulisses Ribas Junior hoy izy:
Araho ny tolo-kevitry ny tranokala, ampidiro vaovao sy fiverenana na fahadisoana »Microsoft Visual Basic» Hadisoana amin'ny fe-potoana famonoana «13»: Type Incompatíveis.
Ny antony izay mandefa fanazavana amin'ny tsato-kazo, dia satria ny varavarankely mba hanao izany fanahafana:
Ny teboka, toy ny mpanavotra an'arivony
Ny takelaka, ho toy ny sakaizan'ny isam-bolana
Ny takelaka, ho toy ny lisitry ny fisarahana.
Raha manana fisalasalana ianao dia nandefa mailaka izahay.
ALEJANDRO hoy izy:
Izany no tsy tsara kajikajy, nandefa anareo ho any amin'ny Tendrontany Avaratra, no nanaovako izany na dia eo aza ny tahirin-kevitra avy araka izay any Excel ary mandefa ny Tendrontany Avaratra, dia toa ny vazivazy izay cobreis noho ny zavatra iray ary ambony tsy miasa, ny fanantenana solucioneis ny olana.
Raha tsy mangataka ny hamerenana ny volako aho.
Efa nanamarina ny lalan-dàlan'ny dosie ve ianao?
Mihazakazaka ny fandaharana aho ary mahazo «error-time'75 ':
Ny famaha 76 dia matetika mifandray amin'ny lahatahiry izay adiresy ahafahana mamorona ny rakitra.
Tsara raha mampiasa làlana iray ianao ao amin'ny lahatahiry D: fa tsy C: satria matetika ianao tsy manana fahazoan-dàlana mivantana amin'ny C:
Tsara ihany koa ny manamarina ny toe-java-misy eo amin'ny faritra toy ny fanasarahana ny laharana sy ny takelaka ho an'ny mpizara an'arivony.
Azo antoka fa miteny amiko ianao.
Carlos Estopier hoy izy:
Hi, mampiasa mampiasa Excel ho an'ny Mac aho ary mahazo fahadisoana 76
Antônio Felipe Abem Athar parente hoy izy:
Quero Excel avoakan'i Google sy Hart ho an'ny mpizara X yz
Janoary, 2018 at
Ny rafitra misy anao dia marina.
Manana izany ve ianao eo amin'ny sehatra Excel na ny fikandrana fenon'ny faritra?
Mba hanamorana ny fanohanana dia azonao atao amin'ny mailaka (at) geofumadas. fr
Francesca Mengozzi hoy izy:
Misaotra anao nandefa ny rohy. Ankehitriny, na inona na inona ataony, dia alefany any amin'ny Faritra Avaratra aho.
Nataoko ny UTM N voalohany ary E, ary avy eo aoriana. Manana an'arivony aho, izay misaraka amin'ny commas sy ny isam-bolana.
Ny koordinany dia avy any avaratr'i Chile (19 s).
Nalefa tany amin'ny paositra ianao, ny olana dia ny nanoratanao ny paositra diso,
Nalefanay tamin'ny mailaka marina izay nosoratanao.
Nandoa indroa tamin'ny vokatra aho ary tsy nahazo ny lanjany mihitsy.
Afaka mahazo izany amiko ve ianao, azafady?
Ny laharan-draharaha dia 5SV58331V3337363F
Novambra, 2017 at
Salama Carolina, efa nandefa ny rohy mankany amin'ny mailaka izahay. Mety ho nandeha ny spam-nao izy.
Carolina Trujillo hoy izy:
Salama, lazaiko aminao fa efa nandoa anao aho fa tsy nomenao safidy hisintona aho. mandoa avy amin'ny PayPal mankany amin'ny anaran'i Carolina Trujillo ary ny isa nomena dia 797849290 × 9052642
Gustavo hoy izy:
Efa nandefasako ny môdelina ho an'ny mailaka, manazava ny zava-misy aty aminay.
Ny template dia natsangana ho an'ny 500.
Mba hanitarana izany amin'ny teboka bebe kokoa dia ilaina ny manova ny kaody. Alefaso amin'ny fanitsiana @ geofumadas ilay môdely ary hanitatra izany izahay.
Miezaka manitatra ny takelaka isika, saingy rehefa manokatra ny tahiry .kml amin'ny google google, dia mahazo ny data mifanaraka amin'ny laharan-tsoratra voalohany ao amin'ny takelaka isika. Ahoana no ahafahantsika manitatra izany mba hampidirana ny habetsaky ny zavatra ilaintsika? Manana fetran-dàlana ve ianao hiditra?
Arahaba Juan Pablo. Izahay dia tezitra amin'ny rizaranao, raha hisintona. Mety efa lasa any amin'ny spam-nao mihitsy io.
Ankoatr'izay, nanome valim-panavotana nataonay izahay.
Raha manana fisalasalana hafa ianao dia lazao anay
Nosokafan'izy ireo tamin'ilay rakitra aho, nandoa ny "fandraisana an'ohatra" indroa aho ary tsy nahazo ilay taratasy.
Ny hadisoana 75 dia midika fa ny lalana alehanao dia tsy manoratra ny zony, fa tsy manao izany mivantana eo amin'ny doka C, andramo adiresy hafa, na ny subdolder na ny d disk
Jean Braga hoy izy:
Ny vidiny, ny fiakaran'ny vidim-panafody ary ny fanafody fanaraha-maso amin'ny varavarankely, dia mitohy ny olana.
«Tsy misy hadisoana raha tsy misy ny '75':
Erro avy amin'ny fidirana amin'ny lalana / arsiva ».
Toerana na arivoarivo kml: c: \_ Karazana 25 X.kml
Detalhe: Karazana 25 X
Ampio aho hamaha ity olana ity.
Ratsy ny mandrindra ny fandrindrana.
Na ponto (.) Ny virgin (,) dia mitovy amin'ny teny.
Tentei alter ny mihetsika mankany mascara manao tsara, mas não deu certo.
Ahoana no hamahana ity olana ity ???
Ny lalana mifandraika amin'ny rakitra, ho ohatra
tahiry: /// C: /Users/geofumadas/Pictures/005c_got.png
Fomba iray mora hahitana làlana, sokafy google chrome, ary avy ao ianao mampiasa «ctrl + o» dia hikaroka ny rakitra. Ao amin'ny url dia ho hitanao ny làlana.
Arahaba indray maraina,
Misaotra betsaka anareo noho ny fanampiana, efa nanapa-kevitra izahay fa ny tsy fahombiazana, na izany aza, ny fanontaniana napetrakay amin'izao fotoana izao dia ny fomba hidirana sary amin'ny teboka eo an-toerana. Inona no lalana tokony hampidirintsika?
Arahaba ry Gustavo.
Hamarino fa ao amin'ny fametrahana ny sehatr'asa eo amin'ny faritra misy anao, ny fisarahana an'arivony dia ny takelaka ary ny fametrahana ny decimals dia ny teboka.
Raha mbola mamorona zava-manahirana ianao, manorata any amin'ny tonian'ny famoahana, alefaso ny rakitra miaraka amin'ny fampahalalana napetrakao.
(tonian'ny geofumadas. com)
Veloma any Oviedo
Nataoko ny mividy ny môdely Excel, rehefa mamorona ny lahatsoratry ny KML, dia nohariana fa ny fandrindrana hita ao amin'ny Google Earth dia tsy miseho ao amin'ny tranokalanao, mitaky antsika tsirairay isaky ny teboka mitovy amin'ny (Nord Pole).
Isika dia any amin'ny faritra avaratr'i Espaina ary ny hevitray dia ny fampiasana ny môdelina mba hitadiavana ny hevitra nalaina sy ny sarin'izy ireo.
Indraindray dia mandeha mankany amin'ny ordinatera mailaka an-junk,
Jereo, ary raha manana olana ianao dia manorata aminay amin'ny mailaka izay mitondra ny fifanarahana.
Patrick hoy izy:
Ry malala, nataoko tamin'ny Paypal aho, nefa mbola tsy mahazo ny mailaka amin'ny rohy download. Hafiriana no fotoana iandrasana?
Nandefasanay hafatra tamin'ny mailaka izahay. Na izany aza, tsy maintsy mahita spam foana ianao, indraindray any ho any.
Cristina hoy izy:
Efa nataoko ny Paya amin'ny alàlan'ny Paypal, saingy tsy nahazo rohy aho mba haka ny modely. Nitsikera ny spam aho ary tsy hita ihany koa. Mandra-pahoviana no handefasana ilay mailaka?
Aprily, 2016 at
Izahay dia efa namerina vola ilay môdely izay novidianao indroa. Raha manana olana bebe kokoa ianao, ampahafantaro anay.
Novalianay tamin'ny mailaka izahay. Indraindray mandeha amin'ny spam izy io, fa nasehinay anao ilay rohy. Raha manana olana ianao dia ampahafantaro anay.
CIRILO GIRALDO SALAZAR hoy izy:
Ary mba hamitana ny famantarana ny fifanakalozana natao tamin'ny PayPal dia:
Azafady, manantena aho fa hamaly haingana.
Amin'izao fotoana izao ... misaotra
Ry tompondanitra Geofumadas.com, efa nandoa vola tao amin'ny PayPal ilay vokatra "EXCEL TO GOOGLE EARTH AVY ANY amin'ny UTM COORDINATES" ary tamin'ny fotoana nandefasanao ny programa dia mandefa ahy hiverina any PayPal, ary izany no diso raha tsy nampoizina ilay vola $ 4.99 USD.
Tsy mieritreritra aho fa ny hahazo izany vokatra voatahy izany dia tsy maintsy mandoa $ 10.00 USD.
Lazao ahy izay tokony hatao mba hampidirana ny programa na hoe inona no tsy maintsy hiandry raha sendra mailaka manokana amiko izy ireo; inona no tokony hatao mba hananganana ny vola fanampiny azoko tamin'ny anarany?
Hamarino ny spam. Mandeha indraindray izy. Raha manana olana ianao dia manorata amin'ny mailaka izay mivoaka amin'ny invoice.
Alahady hoy izy:
Nividy ny môdely aho ary tsy nahazo izany tamin'ny paositra, toy ny ataoko mba handefa ahy toy izany, Misaotra.
Jereo ny mailaka Spam.
Mandeha indraindray izy. Raha manana olana ianao, valio ny mailaka izay voalaza ao amin'ny fanamafisana ny fandoavana.
carlos chorus hoy izy:
Efa nataoko ny fandoavam-bola ary tsy tonga ny rakitra.
Manova ny lalana izay hamonjena ny rakitra.
Mandritra izany, tsy ao anaty dina izy, fa eo amin'ny d disk, satria tsy misy fepetra C ny directa indraindray.
tsara ny tolakandro
Nanana olana tamin'ny fiara sarotra tamin'ny PC aho ary tsy maintsy nanova izany aho. Te hampiasa ny endriny aho handefasana UTM ho an'ny Google Earth ary manome ahy ity hafatra manaraka ity
Ny fe-potoana 76 dia nitranga tamin'ny andrana
Tsy hita ny lalana.
Ao amin'ny mailakao izany. Hamarino fa indraindray dia mandeha amin'ny spam izy io
Juan Carlos Vega hoy izy:
Efa naloako, aiza no nandefasako ny template ????
Ity môdely ity dia namboarina hiditra amin'ny angon-drakitra UTM. Azo ampiana ny mari-pahaizana na mari-pahaizana / minitra / segondra.
Eny, afaka manampy sary ianao.
Ovay ny karazana sary masina ... tsy eo amin'ny fampandehanana ny modely ankehitriny.
Manamboatra modely arakaraka ny fepetra antenainao… $ 50 $.
joseluis hoy izy:
hi g! Indraindray nanampy ahy hampakatra ny rakitra ho any amin'ny tany google ianao, mahaliana ahy amin'ity lohahevitra ity, ary vonona ny handoa ny vola nangatahana aho, saingy te-hanazava fanontaniana sasantsasany aho:
1-Azo atao ny manova azy mba hampiasana diplaoma, minitra ary segondra na dingana.
2-Azoko atao ny manova ny karazana kisary amin'ny alàlan'ny fandrindrana.
3-afaka manampy sary vitsivitsy aho.
Inona no mety ho vokatr'izany?
Misaotra ny fandraisanao anjara, ,,,,,,
Avereno ny pejy, tokony hahita rohy ho an'ny Download / mividy ianao
Julian Morales hoy izy:
Tiako ny hahazo an'io modely io, dia amidy na aiza no ahafahako mahazo izany
Ramona hoy izy:
Azonao atao ny manondro hoe aiza ny rohy mankany amin'ny download, tsy hitako ao amin'ny lahatsoratra
Ampiasao ilay rohy izay ao amin'ny lahatsoratra
Tena tsara ny fampiharana. Ahoana no ahafahako maka azy io?
Silvia hoy izy:
Jona, 2014 ao
Ahoana no fomba hamelako ilay endrika mba hanaporofoana izany?
Hugo Montes de Oca hoy izy:
Tena fitaovana tsara hanamoràna ny asan'ny birao, ny fiarahabana
Tahaka ny fampiharana mahaliana, ilaina ny manaporofo izany
Rafael hoy izy:
salama tsara fa ny olako dia ny nivoako voalohany rehefa nanome azy aho hamorona kml "fahadisoana famonoana 75" ary avy eo nataoko ny zavatra nolazain'izy ireo fa azoko atao ny "76 famonoana diso" azoko atao
Alefaso aminay ny rakitra hodinihina.
Hatreto dia efa niasa tsara izy io, mety ho ny saha sasantsasany izay ampidirinao amin'ny fomba hafa.
Mikel Belasko hoy izy:
Amin'ny teny manokana dia mandika azy ireo amin'ny latitude 32400.000000 sy longitude -1.000000 ° Mampiasa ireo mpandrindra mitovy amin'ny kalkulator miova fo, na izany aza, tsikaritro fa tsara ny fitrandrahana tany am-boalohany, satria nanova ny teboka tamin'ny tany google aho, dia nametrahako ireo mpandrindra ny kajy. ary manjary tsara ahy izany. Misaotra betsaka
Na inona na inona ataoko (nataoko daholo ny zava-drehetra ka ny filoham-pirenena miaraka amin'ny vanim-potoana ary an'arivony miaraka amin'ny commas) dia mitondra ahy foana amin'ny ekoatera. Ny halavoana izay heveriko ho tsara ho ahy, fa ny latitude 0. Nataoko manokana ity data UTM ED50 ity fa tsy wgs84 an'ny Espana Avaratra (Navarra), ary nifarana ara-dalàna tao amin'ny Hoalan'i Guinea.
Ny kaontiko mifangaro amin'ny karamako dia mifandray amin'ny kaonty mailaka hafa ary tiako raha handefa izany adiresy mailaka izany izay nandefasako ilay hafatra. Misaotra betsaka anareo
Azo inoana fa manana olana amin'ny famantarana an'arivony ianao.
Andramo ny miditra ao amin'ny UTM koordinate, tsy misy fe-potoana na commas raha hijery raha ity no olana.
Avy eo dia mandehana any amin'ny faritra misy ny milinao ianao ary manova ny fanovana. Asaina ianao hampiasa ny comma ho fisarahana an'arivony sy mpizara lisitra; ny teboka amin'ny maha mpanelanelana farany.
Izaho no namorona ny rakitra saingy rehefa mijery izany eto an-tany dia mandefa ahy any amin'ny pou polika hoy aho aminao: ireo mpandrindra UTM izay ampiasaiko dia novaina avy tamin'ny mpandrindra tao amin'ny latitude sy longitude, saingy ny fampiasana ny daty ED50 fa tsy ny WGS84. Mila mandalo azy ireo ve aho amin'ny endrika UTM nampiasaina tamin'ny Excel? Na izany na tsy izany dia nihevitra aho fa na tsy mifanentana aza izy ireo dia tsy ho avo be ny hantsana, satria raha ampitahako ny mpandrindra sasany amin'ireo ampiasaiko amin'ny ED50 miaraka amin'izy ireo ao amin'ny WGS84 (avy any Espana izy ireo), ny offset dia vitsy metatra, fa eo amin'ny sarintany Mino aho fa tsy mahita na inona na inona, na dia ireo labels ao anaty tsanganana "labels". Misy hevitra izay tsy marina amiko? marina ny dingana sy ny endrika farany (ny faritra dia 29 no?).
Misaotra anao. Miarahaba!
GLORIA DOMINGUEZ hoy izy:
Desambra, 2012 ao
Nanoratra momba ny fiovaovako avy amin'ny jeografika mankany UTM aho, saingy manana olana amin'ny fisie aho mba hamokarana ny rakitra mankany amin'ny Google raha mamokatra ny rakitra fa ny teboka rehetra dia mijanona miaraka amin'ny 180grades 0minutes 0.00Seconds North ary miaraka amin'ny Latitude 74 degre 0 Minitra ary 0.00 segondra Ny tandrefana koa dia tsy mampiseho ny dikany amin'ny sari-tany. Ankasitrahako raha afaka manampy ahy ianao. Gloria Dominguez
Jereo ny mailaka amin'ny spam, indraindray ny rohy download raki-maso dia mandeha any
Azafady, hamafiso aho ny antony tsy nahazoana maodely alaina amin'ny fisie google tany, handefasana ireo mpandrindra ara-jeografika mankany UTM. Misaotra anao GEDL
Tsy tena nanandrana azy io tao amin'ny Mac IOS.
Misaotra hamaly aho dia nataoko izay nomena ahy. Na izany aza dia nitohy ihany ny olana, nanova ny anarana notendrena tao amin'ny rakitra kml aho mba hanondranana ary hanatsara ilay zavatra. Tamin'ny fanohanan'ny namana no niovako tamin'ny «\_ SIMV \_ MAPAS.000.000.000.kml» ka «\_ SIMV \_ MAPS \_ test.kml». Ankehitriny tsy andefasana azy io ilay lahatahiry natokana ho an'ny fanondranana fa amin'ny farany kosa dia mivoaka ny rakitra, dia ao anatin'ny fampirimana mitovy amin'ilay izy no misy ny fiparitahana.
Manantena aho fa afaka mamantatra ny hadisoana ianao, niasa tsara teo am-baravarankely aho fa ankehitriny miasa amin'ny Mac aho ary handeha izahay, raha misy sosokevitra azoko ankasitrahana izany. Misaotra indray
Andramo amin'ny fampiasana anarana sy lalana mora, ohatra:
Ataovy azo antoka fa manana zo hanoratra ao amin'io lahatahiry io ianao, miezaka mamorona rakitra ao amin'ny navigateur mac.
Miezaka hampiasa izany ao amin'ny Mac aho, hoy izy amiko rehefa manome azy aho mba hamorona: "Ny diso" 52 'dia natao tamin'ny laharana, anarana na ny laharan'ny lahatahiry diso. "
Manome safidy efatra aho, ny voalohany dia nesorina, dia afaka misafidy ny iray amin'ireo telo farany aho:
1. Tohizo ny 2 Vitao 3.Depuration 4.Help
Misafidy ny Debug aho ary hamela varavarankely iray milaza hoe:
'Macro novaina ho an'i Geofumadas
Tsy maintsy averinao ao amin'ny format kml
Azonao atao izany amin'ny gvSIG na programa GIS hafa
antonio becerril hoy izy:
Mila mampakatra sarimihetsika dwg ho an'ny tany google aho, toy ny ataoko, ny sary dia ny andalana iray amin'ny lalana mahazatra ao coordin
C: / karta /
Ny tena azo ampiharina dia ny avy amin'ny Internet navigateur, tadiavo ny adiresy mba hahitana ny lalana, satria raha manana ny anaran'ilay lalana misy habaka tsy misy ohatra ianao toy ny: «ny antontan-taratasiko» dia mila manoratra azy ianao raha hita ao amin'ny URL misy ny mpizara.
Jorge Echeverria hoy izy:
Salama afaka manampy ahy hahazoako "75 errorimeime" manome ohatra ho an'ny "làlana" aho ho an'ny fananganana ny kml file. ohatra amin'ireo antontan-taratasiko na amin'ny fisintonana na eo amin'ny desktop. Misaotra anao
Moisés hoy izy:
Jolay, 2012 ao
Misaotra, izaho dia tamin'ny spam.
Jereo ny mailaky ny SPAM, indraindray dia miverimberina ny hafatra izay miaraka amin'ny rohy ahafahana mandefa mivantana.
Na ahoana na ahoana, dia nandefa izany mivantana tany amin'ny mailaka izahay.
Nanao ny volany tamin'ny paypal saingy tsy navoaka ny rakitra, raha mila ny id. Alefako amin'ny transakta.
Mey, 2012 ao
Ny hany fomba ananantsika, dia mampiasa PayPal na debit / credit card miaraka amin'ny PayPal.
JOSE RIVERA CABALLERO hoy izy:
Ilaina maika fa ny famerenana ny fampiharana Excel amin'ny Google Eaarth, fa manana karatry ny debitika ihany aho.
Inona no tokony ataoko, raha manana fifandraisana any Però izy ireo, mba handefa banky?
Azafady, mila ny fangatahana amin'ny URGENCY aho.
Alefaso ny adiresin'ny sary ampiasainao mba hitsapana azy ary hijery izay mitranga.
Indraindray dia fanontaniana iray izay tsy dia vita tsara ny zotra. Fomba iray hahitana hoe ahoana izany làlana izany ny fanokafana ny fisie sary avy amin'ny browser, amin'ny fipihana tsara ny sary sy ny fisafidianana ny hisokatra amin'ny ... ary misafidy ny browser; ka mijery ny zotra etsy ambony ianao.
Ericson hoy izy:
Niezaka ny hampiditra ny sary avy amin'ny làlana eo an-toerana aho saingy tsy mandeha izany, rehefa miditra ny sazy araka ny teninao, ny sary dia ampiana an-tsoratra fa tsy ampahany amin'ny singa fototra. Ary rehefa miezaka mampiseho ny sary aho dia ny frame ihany no mivoaka fa tsy ny sary.
Jereo ny tab raha mifandray.
Raha tsy izany dia afaka manoratra ahy ianao editor@geofumadas.com
ary nanao fandaharana izahay.
Ana hoy izy:
Hello Editor, mila miresaka aminareo aho momba ny môdely iray izay nivarotra ahy, azonao atao ve ny manatrika ahy amin'ny chat?
Eny amin'ny fampiharana, ny tsara indrindra dia ny manokatra izany amin'ny programa GIS ary manondrana azy any kml.
Raha tsy manelingelina izany, alefaso amin'ny mailaka aho ary hilaza aminao aho raha afaka manampy anao aho, satria hitako ny endriky ny latabatra.
Tsy azon'ilay mpanatanteraka ny dikany
Aiza no ahazoako fanampiana manokana avy amin'ny mpanara-maso ... Mila maika ny fanampianao aho, na inona na inona vidinao, misaotra.
Miala tsiny fa izy ireo dia amin'ny format excel, ny teboka 600 bebe kokoa izay ananako.
Toerana mahaliana: Actan stelle
Ity no tiako hamadihana ho kinova kinova google tany, ny zavatra misy dia misy teboka mahaliana mihoatra ny 600 mila hafoiko amin'ny endrika kml? Tsy haiko raha manazava ...
Manomeza ohatra iray momba ny fomba isehoan'ny teboka iray, ary amin'ny endrika inona izy ireo.
Salama ... azafady fa mila manova tahiry mahaliana iray manontolo miaraka amin'ireo fandrindrana azy ho endrika kml hahitako azy ao amin'ny google Earth ... misy olona afaka mitarika ahy, misaotra.
Eny, faly aho fa niasa izany.
Nodinihiko indray ary azo antoka fa marina, amin'ny sehatra isam-paritra, ny teboka dia tsy maintsy manasaraka ny isam-bolana, ny sasantsasany amin'ny takona an'arivony ary ny takelaka koa separador ny lisitra.
Vonona, misaotra ny fandraisana anjara!
Nandinika izany aho ary tsara ilay izy, alefaso any Indonezia.
Toa misy fifanoherana eo amin'ireo vondrona Excel sy ireo vondrona izay alefany.
Azonao atao ny mahita fa eo amin'ny sehatry ny solosaina, ny faritra isam-paritra. Hamarino fa ny teboka dia ny fisintahana ny isa enim-bolana ary ny mpandahatra ny takelaka an'arivony ary ny takelaka koa separador ny lisitra.
Nanoratra azy ireo aho raha nanondro izy ireo:
792713.85 ao amin'ny koordinate X
1127836.33 amin'ny kôliny Y
Ary misy varavarankely iray milaza hoe:
“Error '13' nitranga tamin'ny fotoana nihazakazahana.
hamarana, debug na fanampiana.
Tsy mifanentana ireo karazana »
Ity ny format dot.
Tokony hanoratra ny angon-drakitra amin'ny endrika ianao:
Andramo izany Satria ny maodely dia mila dinihina ny commas hanasaraka ny an'arivony sy isa hanasarahana ny fanapaha-kevitra; Tokony hampiasa an'io fomba io ianao.
Ireo no koordina,
ary rehefa manao ny fandehan-javatra aho dia alefako any Indonezia ary ireo koordina ireo dia avy any amin'ny Repoblika Bolivariana ao Venezuela, soso-kevitra rehetra?
Yorodis Ramírez hoy izy:
Ny fanontaniako rehetra dia voavaly .. !!
Elías González hoy izy:
Esory ny fahadisoana:
Hadisoana amin'ny fotoana hazakazaka '75':
Izany dia satria voafetrako ny fidirana mitondra fiara C: ny fanovana ny làlana no miteraka nefa tsy misy olana. Hiezaka ny hanao ilay miteraka polygon aho.
Miditra azy ireo ianao, jereo fa ny baiko dia ny Avaratra, Atsinanana (Lat, Long)
raha ao amin'ny môdeliny dia ao amin'ny baiko Atsinanana Avaratra (Long, Lat).
Tokony hesorinao ny koma, ka miditra toy ny isa izy ireo.
Nanao fitsapana aho ary raha ny marina dia latsaka ao amin'ny faritra misy anao, andramo indray ary ampahafantaro ahy.
Mieritreritra aho fa tsy maintsy manao fanavaozana aho mba hahitana ny laminan'ny koordinate dia lat, izay matetika no fampiasana matetika.
Eto aho dia mamela ny fikajiana sasantsasany noraisina an-tsaha tany amin'ny Repoblika Dominikanina miaraka amin'ireto fepetra manaraka ireto:
Rehefa nanandrana nampiakatra aho dia nianjera tany Amerika Atsimo izy ireo.
Misaotra mialoha .. !!
Manoro hevitra anao aho handinika ireto manaraka ireto:
Tadidio fa nafindra ny orthophotos amin'ny Google Earth, ary misy fiovan'ny karazany maro. Ka rehefa mamorona mpandrindra izay fantatrao, miaraka amin'ilay modely, manamarina izay asehon'ny Google Earth, mba hahitana raha mifanaraka amin'ny zavatra navotsinao tamin'ny template miaraka amin'ny Datum WGS84.
Ny mahaliana ny fanamarinana dia raha mifanaraka ny mifanandrify, raha tsy misy famaha olana.
Raha mifanandrify ny fandrindrana, nefa tafavoaka amin'ilay sary ilay izy, mety ho avy amin'ilay sary ilay lesoka. Na izany aza dia manoro hevitra aho fa hitatitra ireo lesoka hitany, satria namorona ilay maimaim-poana ho an'ny fampiasana maimaim-poana aho nefa mitaky ny hanomezany ahy valiny miaraka amin'ny fandinihana izy ireo.
Ny dingana manaraka dia ny hitaterana ilay polygon, ho hitantsika ao amin'ny lahatsoratra hafa.
Mametraha ity lahatsoratra ity hametra ny làlana ao amin'ny lahatahiry eto an-toerana
Raha raisina an-tsoratra fa ny tahiry dia eo amin'ny toerana C: /Users/Usuario/Downloads/woopra_ios.png, avy eo ilay code dia:
Firy ny fivoahana ao amin'ny faritra 19?
Raha azonao atao ny manoratra koordinary, mba hanamarina izany.
Toa tsy manana zo hanoratra ao amin'ny lisitry C ianao:
Andramo ny làlana ao anatin'ny rakitra mpampiasa.
Azonao antoka ve fa mampiasa WGS84 ianao?
Jereo, tsy fantatro raha misy diso amin'ity rafitra ity ao amin'ny firenenao.
Firy ny fivoahana?
Nifoka, satria raha hanoratra momba ireo olana ireo dia tsy maintsy mifoka sigara rongony ianao ... Hehe.
Marcos Diaz hoy izy:
misaotra ny fandraisana anjara .. EXCELLENT .. !!
(Nahoana no Geofumadas ??)
Izaho dia nanao ny dingan'ny famoahana sary avy any amin'ny lahatahiry eto an-toerana ary tsy azoko atao ny mamintina azy tsara raha toa ka azonao atao bebe kokoa ny fomba hanaovana izany tahaka izao satria niasa ho ahy ny mampakatra sary avy amin'ny tranonkala iray.
Niditra tao amin'ny Zone 19N ihany koa aho, ary nirifatra tanteraka ny angon-drakitra.
Isaorana arivo. !!
Wander Santana hoy izy:
Fotoana fohy i Gabriel,
Raha ny lisitry ny UTM Flag, miaraka 19 faritra amin'ny Ila Bolantany Avaratra, indrindra tany amin'ny Repoblika Dominikanina, dia latsaka nafindra any amin'ny faritra sy ny ao amin'ireo Flag. Naveriko imbetsaka ny dingam-panafahana, ny antontan'isa samihafa ary ny vokatra dia mitovy. Misaotra mialoha ny fanatrehana ny ahiahiko.
Mieritreritra aho, mieritreritra aho fa io no version 2 amin'ity modely ity, toy ny nataonay ilay mandefa hevitra sy manondro ny AutoCAD
Azoko ny fahadisoana:
Moa ve isika satria tsy maintsy mamorona antontan-dahatsoratra?
Hiezaka ny hahatakatra ny fomba fiasan'ny makrô aho, satria amiko dia toa ho mora kokoa ny hamorona poligon amin'ny fidirana fidirana. Veloma finaritra …